Wararkii u dambeeyay rabshado ka socda caasimada Itoobiya iyo siyaasiyiin la xiray ‘sawirro’ | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Wararkii u dambeeyay rabshado ka socda caasimada Itoobiya iyo siyaasiyiin la xiray...
Wararkii u dambeeyay rabshado ka socda caasimada Itoobiya iyo siyaasiyiin la xiray ‘sawirro’
Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa waxaa shalay ruxay banaan baxyo rabshado wada oo ka dhashay dilkii shalay loo geystay fanaanka caanka ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo lagu magacaabo Haacaaluu Hundeesaa.
Banaanbaxyadan oo ay dhigayeen dhalinyaro ka careysnaa dilka fanaanka ayaa waxay taayaro ku gubeen waddooyinka, sidoo kale gaadiid kala duwan iyo dhismayaal ganacsi ayaa la gubay.
Dhalinyarada dibad baxayay ayaa ku qeylinayay cadaalad iyo in la soo qabto kooxihii ka dambeeyay dilka Fanaanka reer Oromo Haacaaluu oo ka mid ahaa maxaabiistii siyaasadda u xirnaa ee la soo daayay sanadkoo 2018, markii Abiy Axmed talada dalka Itoobiya uu la wareegay.
Dibad baxyada rabshadaha wata ee shalay gilgilay magaalada Addis Ababa ayaa sababay in dowladdu ay qaado tallaabooyin ay ku xakameyneyso, iyadoo hawada laga saaray isgaarsiinta, sida Internet iyo taleefanada.
Dhinaca kale, ciidamada boolisla Itoobiya ayaa xiray Garba Bekele iyo Jawaar Maxamed oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha Oromada ee si weyn uga soo horjeedaa dowladda uu hoggaamiyo Abiy Axmed.
Xaalada Itoobiya ayaa u muuqata mid rabshado lugaha la galeysa iyo xaalado aan deganeyn, tan iyo markii xilka loo kordhiyay ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.